सुशान्त-रिया प्रकरण : बलिउडका ड्रग्सका घटना किन बाहिर आउन पाउँदैनन्?
नेपाल लाइभ शनिबार, असोज ३, २०७७, १४:५०
बिबिसी- भारतीय फिल्म अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्युको जाँच अब ड्रग्सको अँध्यारो दुनियासम्म पुगिसकेको छ। यसमा रिया चक्रवर्तीको भाइ शौविक चक्रवर्ती हुँदै अहिले रिया चक्रवर्ती आफैं पनि मुछिएकी छन्।
गत आइतबार नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसिबी) ले अन्य ६ जनालाई समेत गिरफ्तार गरेको छ।
सुशान्त सिंह राजपुतको मृत्युको घटनालाई लिएर रिया चक्रवर्तीविरूद्ध एफआइआर दर्ता भइसकेको छ‚ जसको सिबिआई अनुसन्धान चलिरहेको छ। एनसिबीको अनुसन्धानका साथसाथै अहिले भारतीय चलचित्र क्षेत्रमा पनि यस विषयमा धेरै चर्चा चलिरहेको छ।
भारतीय राज्य सभामा समाजवादी पार्टीकी सांसद जया बच्चनले शून्य समयमा बोल्दै केही व्यक्तिले चलचित्र उद्योगकै छवि खराव गराएको बताइन्।
बलिउडकर्मीहरूले नशालु पदार्थ सेवन गरेको विषय बाहिर आउनासाथ भारतीय अभिनेत्री कंगना रणावतले बलिउडका ९९ प्रतिशत कलाकारले नशालु पदार्थ सेवन गर्ने अभिव्यक्ति दिइन्। त्यही कुरालाई काट्दै रविना टन्डनले टोकरीमा रहेका केही बिग्रिएका स्याउलाई औंल्याएर सबै स्याउ खराब छन् भन्न नमिल्ने तर्क दिइन्।
कंगनाले लगाएको आरोप
अभिनेत्री कंगना रणावतले ९९ प्रतिशत भारतीय अभिनेता/अभिनेत्रीले ड्रग्स लिने आरोप लगाएकी थिइन्। तर मुम्बई पुलिसले यो विषयमा कंगनाको समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। किनकी केही समयअघि रणावतका नजिकका मित्र अध्ययन सुमनले कंगना रणावतले समेत सुमनलाई ड्रग्स दिने कोशिस गरेको भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यो विषय अहिले अर्को चर्चाको विषय बनेको छ।
यहाँसम्म कि अहिले कंगना रणावतको पहिलेको एक इन्स्टाग्राम भिडियोसमेत भाइरल भइरहेको छ‚ जसमा रणावतले खुलेरै आफूले ड्रग्स लिने गरेको बताएकी छन्।
शर्लिन चोपडाको दाबी
केही दिनअघिमात्रै भारतीय अभिनेत्री शर्लिन चोपडाले बलिउडमा ड्रग्सको प्रयोग हुने गरेको भन्दै कंगना रणावतकै बोलीमा होमा हो मिलाउँदै उनले भनेकी छन्, ‘बलिउडमा मात्र ५ प्रतिशत बलिउडकर्मीमात्र यस्ता होलान्, जो ड्रग्सको प्रयोग गर्दैनन्।’
शर्लिनले यस्तो खुलासा गरेपछि बलिउडमा एककिसिमको हलचल मच्चिएको छ किनकी यसअघि बलिउडकर्मीहरूले ड्रग्स सेवन गर्ने कुराहरू आधिकारिक रूपमा बाहिर आएको थिएन।
शर्लिनले भनिन्, ‘सुरू सुरूमा फिल्म निर्माताहरू मलाई पार्टीमा बोलाउने गर्थे। त्यो समय मलाई त्यहाँ गयो भने नेटवर्क फैलन्छ, मानिसहरूसँग चिनजान हुन्छ, जसले गर्दा काम पाइन्छ जस्तो लाग्थ्यो। तर जब मैले त्यस्ता पार्टीमा पनि नेटवर्किङ् कम र नशालु पदार्थ ज्यादा लिने मान्छेहरू देखें अनि त्यस्ता पार्टीहरूमा जानै छाडिदिएँ।’
एनसिबीका कार्यकारी निर्देशक केपिएस मल्होत्राले यस्ता प्रकारका उजुरीहरू पहिला पनि लुकीछिपी आउने गरेको बताए।
यसबारे जुनसुकै अनुसन्धान गरेपनि बालुवामा पानी हालेजस्तो हुने अभिनेत्री शर्लिन बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, ‘एनसिबीको अनुसन्धानबाट पेडलर्स, डिलर्सको नाम त सार्वजनिक हुन्छ तर यीमध्ये केही भने अझै पनि यसबाट आफूलाई लुकाउन समर्थ हुनेछन्। र त्यसैगरी नै यो घटना पनि शान्त हुन्छ। त्यसपछि फेरि पहिलेको जस्तै।’
बलिउडमा ड्रग्स र मादक पदार्थसँग सम्बन्धित चर्चित घटना
बलिउडमा पहिलेदेखि नै ड्रग्ससम्बन्धी विभिन्न समाचारहरू बाहिर आइरहेका हुन्छन्। तर आधिकारिक रूपमा गरिएको गम्भीर अनुसन्धानमा भने अहिलेसम्म केही हात लाग्न सकेको छैन। त्यसो त कतिपय बलिउडकर्मीहरू ड्रग्स प्रयोग गरेकै अभियोगमा जेलसम्म गएका छन् भने कतिपय अझै पनि ड्रग्स रिह्याबिलिटेसनमा उपचार गराइरहेका छन्।
भारतीय चर्चित अभिनेता संजय दत्त ड्रग्सको मामिलामा चर्चित छन्। उनका पिता सुनील दत्तले संजयलाई उपचार गराउनका लागि रिह्याव सेन्टरसमेत लगेका थिए। त्यसपछि फेरि संजय बलिउडमा प्रवेश गरेका थिए। संजय दत्तको जीवनीमा आधारित फिल्म संजूमा समेत यो कुरालाई देखाइएको छ।
राज बब्बर र स्मिता पाटिलका छोरा प्रतीक बब्बरले आफू १३ वर्षको हुँदादेखि ड्रग्स लिन सुरू गरेको बताएका थिए।
पछि उनले रिह्याव सेन्टरमा उपचार गराएर यसबाट मुक्त पनि भएका थिए। उनी अहिले रिह्याव सेन्टर गएपछि सामान्य मानिसको जस्तै जीवनयापन गर्न पाउँदा हर्षित भएको बताउँछन्।
फिरोज खानका छोरा फरदीन खानलाई सन् २००१ मा मुम्बई प्रहरीले ड्रग्स प्रयोग गरिरहेका बेला पक्राउ गरेको थियो। त्यो घटना पछि गएर अदालतसम्म पुग्यो। पछि उनले पनि एक रिह्याव सेन्टरमा उपचार गराएर आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेपछि उनलाई कुनै सजाय सुनाइएको थिएन।
संजय खानका ज्वाईं डिजे अकिललाई सन् २००७ मा दुबईमा प्रतिबन्धित ड्रग्स प्रयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। पछि उनी विरूद्ध कुनै प्रमाण नमिलेपछि उनी छुटेका थिए।
चर्चित क्यारेक्टर आर्टिस्ट विजय राजलाई सन् २००५ मा दुबईमा ड्रग्स सेवन गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। त्यो समय विजय ‘दिवाने हुए पागल’ फिल्मको सुटिङमा व्यस्त थिए। तर विजयले भने यो घटनालाई सधैं नै सत्यता नभएर अफवाह भएको बताउँदै आएका छन्।
कुनै समय भारतीय जनता पार्टीका चर्चित नेता रहेका प्रमोद महाजनका छोरा र टिभी सो बिग बोसबाट चर्चामा आएका राहुल महाजनको नाम पनि ड्रग्ससँग जोडिएको छ।
उनी ड्रग्स सेवन गरेको आरोपमा जेलसमेत परिसकेका छन्। उनले पनि आफूमाथि लागेको सबै आरोपहरू सत्य नभएको जिकीर गर्दै आएका छन्।
कसरी सञ्चालन हुन्छन् मुम्बईका पार्टी?
मुम्बईमा फिल्मकर्मीहरूका अनेक प्रकारका पार्टी हुने गर्छन्, जहाँ अनौठा अनौठा कुराहरू देख्न पाइन्छ।
कहिले फिल्मको सफलताको नाममा त कहिले मुहुर्तको नाममा पार्टीहरू हुने गर्छन्। त्यहाँ उनीहरूसँगै मिडियाकर्मीहरू पनि हुने गर्छन्। यस्ता पार्टीमा प्रायः कि चर्चित मुहारहरू कि त रक्सीका बोतलहरू देख्न पाइन्छन्।
तर ड्रग्स भने हुँदैन। मिडियाको सामुन्ने पार्टी हुने भएकाले पनि हुन सक्छ यस्ता हर्कतहरू त्यति देखिँदैनन्। तर विभिन्न फिल्मकर्मीहरूले प्राइभेट पार्टी पनि बोलाउने भएकाले मिडियाकर्मीहरूलाई त्यस्तो पार्टीमा प्रायः बोलाइँदैन।
बलिउडमा मादक पदार्थ सेवनको कनेक्सन आक्कल झुक्कल बाहिर आउने गरेका छन्।
(बिबिसी हिन्दीबाट अनुवाद गरिएको।)
बहुवर्षे ठेक्का लगाउने आयोजनाको प्रस्ताव साउनमै गर्नुपर्ने
अक्षय कुमारको फिल्म 'लक्ष्मी बम्ब' विवादमा, नाम नै फेर्न चेतावनी अक्षय कुमारको प्रदर्शनको तयारीमा रहेको फिल्म 'लक्ष्मी बम्ब' विवादमा तानिएको छ। ट्रेलर रिलिज भएपछि कतिपय व्यक्ति र समुदाय फिल्मको नाम... शनिबार, कात्तिक ८, २०७७
वन्यजन्तु संरक्षणमा आधारित लघुचलचित्र ‘समर्पण’ सार्वजनिक नेपाल आर्मी र ब्रह्माण्ड मोसन पिक्चर्सले निर्माण गरेको लघु चलचित्र ‘समर्पण’ सार्वजनिक भएको छ। शनिबार, कात्तिक १, २०७७
जसका लागि उमेर केवल एक संख्या मात्र हो ७८ वर्षको उमेर सामान्यतया रिटायर्ड भएर आराम गर्ने समय हो। तर, उनी अझै पनि त्यही जवानीको जोसमा फिल्महरुमा अभिनय गरिरहेका छन्। १९ वर्ष... सोमबार, असोज २६, २०७७
बहुवर्षे ठेक्का लगाउने आयोजनाको प्रस्ताव साउनमै गर्नुपर्ने बुधबार, कात्तिक १२, २०७७